एक्जिट पोलहरूमा मोदीको विजय : यस्ता छन् जीतका ४ कारण
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष अमित शाहसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आरम्भिक बयानमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावमा आफूहरू विजयी भएको घोषणा गरेका थिए । उनले चुनाव परिणामपछि बहालवाला बहुमतको सरकारले बहुमतकै साथ दोस्रो कार्यकाल जित्ने भारतीय राजनीतिकै दुर्लभ घटना हुने बताए ।
चुनाव सकिएलगत्तै सार्वजनिक भएका एक्जिट पोलले केही संकेतहरू दिएका भए पनि यो दाबीलाई पुष्टि गर्नका लागि बिहीवार हुने मतगणनाकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिति, निकै भयावह बेरोजगारी र कृषि क्षेत्रमा समस्याका कारण मोदीका प्रतिद्वन्द्वीहरूले बहालवाला सरकारविरुद्ध जनता आक्रोशित रहेको आँकलन गरिरहेका थिए । तर जनताको यस्तो आक्रोशको खासै प्रमाण पाइएन (एक्जिट पोलमा समेत) । राजनीतिक माहोलको शास्त्रीय, पुरातनवादी ढर्राको विश्लेषण गर्ने बानी परेकाहरूलाई यो अनौठो लाग्न सक्छ । तर देशभरिका चुनावी अभियानको निरीक्षण गर्न व्यापक यात्रा गर्दा चारवटा कुरा स्पष्ट देखिए । भाजपा र नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) ले कति सीट जित्ला भन्ने त बिहीवार थाहा पाइन्छ तर चारवटा कुराले आर्थिक पीडा र बहालवाला सरकारविरुद्धको माहोललाई निस्तेज बनाएको देखिन्छ ।
नयाँ भोट बैंक
नयाँ राष्ट्रव्यापी जातमा आधारित भोट बैंक उदाएको छ । यसमा कथित माथिल्ला जातका मतदाता छन् । सन् १९८९ देखि यिनीहरू भाजपाप्रति बफादार छन् तर उनीहरूबीच एक किसिमको विभाजन थियो । केही ब्राह्मणहरूले पुरानो लगावका कारण कांग्रेसलाई मत दिइरहे । केही ठाकुर नेताहरूले उत्तर प्रदेशमा मत भाजपाको पक्षमा पारे । जन संघ र भाजपाले कथित माथिल्लो जातिका मतदातालाई आफूतिर सधैं नै आकर्षित गर्दै आइरहेको छ तर पार्टीप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध मतदाता बनियाँहरू हुन् । त्यसैले इन्दिरा गान्धीले जन संघलाई जहिले पनि बनियाँ पार्टी भनिन्, हिन्दू पार्टी कहिल्यै भनिनन् ।
अहिले माथिल्लो जातका सबै मानिस मोदीको पछाडि लागेका छन् । उनीहरू मोदीको भाजपालाई हिन्दूत्व चम्काउने दल मात्र ठान्दैनन् बरू योग्यतालाई कायम राख्ने बल मान्छन् । अल्पसंख्यक र ‘कम योग्य’ जातले आफ्नो मताधिकार शक्तिका कारण आफूलाई तल पार्ने डर उनीहरूमा छ । यो नयाँ भोट बैंक भाजपाविरुद्ध एकढिक्का भएर भोट दिने मुसलमानहरू जत्तिकै एकढिक्का छ । म गएका ठाउँमा भाजपालाई भोट नदिने माथिल्लो जातको मानिस कमै भेटें । यसले गर्दा मोदीलाई मुसलमान र यादव लगायतका अन्य जातहरूको प्रतिकार गर्न सहयोग गर्छ ।
जातीय जनगणना पछिल्लोपटक सन् १९३१ मा गरिएको थियो । तर २२ देखि २५ प्रतिशतसम्म माथिल्लो जातको उपस्थितिले उनीहरू भारतको सबभन्दा ठूलो भोट बैंक बनेका देखाउँछ र त्यो संख्या मुसलमान, दलित वा एकढिक्का रहेका अन्य पिछडिएका समूहभन्दा ठूलो छ ।
चुनावी अभियान सकिएपछि भाजपाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शाहले सरकार आफ्ना योजनाको अन्तिम कार्यान्वयनमा लागेको बताए । उनी सही छन् । हामीहरूले शौचालय, खाना पकाउने ग्यासको कनेक्सन (उज्ज्वला योजना), घर (प्रधानमन्त्री आवास योजना), मुद्रा र ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाले लक्षित वर्गलाई फाइदा नै पुर्‍याएको पायौं ।
हुन त त्यो पर्फेक्ट छैन । शौचालयमा प्रायः पानी हुँदैन, खाना पकाउने ग्यास पाएकाहरूले सिलिन्डर भर्न सकिरहेका छैनन् र मुद्रा ऋणले रोजगारी पैदा गरेको छैन । तर देशभरि हेर्दा यी योजना जनतामाझ पुगेको चाहिँ देखिन्छ ।
अनि किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी दिइएको सब्सिडीको पहिलो किश्ता पनि पुगिसकेको छ । वास्तविक गरीब र दुर्गम क्षेत्रका मानिसका लागि यो ठूलो परिवर्तन हो । उनीहरूले कुनै घूस नखुवाइकनै यी योजनाको फाइदा उठाउन पाएका छन् ।
यी योजनाहरूले धेरै मानिसहरूलाई फाइदा गराएकोले उनीहरूले भाजपालाई भोट नदिने कुरै हुँदैन । उनीहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् अनि त्यो बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्ने पनि वास्ता गर्दैनन् । उनीहरू व्यवस्थित रोजगारी बजारको अंग बनिसकेका छैनन् किनकि अति नै गरीब छन् । सरकारबाट लगालग केही न केही फाइदा पाउनु उनीहरूका लागि ठूलो कुरा हो ।
अघिल्लो सरकारका योजनाको निरन्तरता
मोदी सरकारले अघिल्लो कांग्रेस सरकारको तुलनामा भौतिक निर्माणमा निकै राम्रो काम गरेको छ : राजमार्ग, बन्दरगाह, मेट्रो रेल, पुल तथा अन्य शहरी निर्माण उसको कार्यकालमा बढेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यी योजनाहरूको परिकल्पना गरेको, योजना तर्जुमा गरेको र आरम्भ पनि गरेको भन्न पाउँछ । तर उसले यी योजनाहरूलाई किन बीचैमा छोडेको वा त्यसलाई पूर्णतया त्यागेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
सबभन्दा स्पष्ट देखिने उदाहरण मुम्बईका ठूला भौतिक निर्माण योजना हुन् । उत्तर–दक्षिण मेट्रो, बन्दरगाहहरू जोड्ने सञ्जाल, नवी मुम्बई विमानस्थल र तटीय सडक सबै यूपीए सरकारका योजना हुन् । तर ती सबैलाई पछि गएर रोकियो । अनि देशभरिका ठूला ऐतिहासिक पुलहरूका काम पनि रोकिए । भाजपाले चाहिँ सबै बाधा अवरोध हटायो र परियोजनाहरूलाई अघि बढायो । त्यसैले उसलाई अहिले फाइदा दिइरहेको छ ।
युवा मतदातामा मोदीभक्ति
सन् १९९७ देखि २००१ सम्म जन्मेका व्यक्तिले लोकसभा चुनावमा यसपालि पहिलोपटक मत दिए । धनी, गरीब जे भए पनि उनीहरू डिजिटल नागरिक हुन् । उनीहरूले डिजिटल स्पेसमा एकजना नेता मात्र चिनेका छन्, एउटा मात्र सन्देश सुनेका छन् र गूगल आउनुअघिका सन्दर्भ उनीहरूलाई थाहै छैन । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, उनीहरू रोजगारी बजारमा आएकै छैनन् ।
उनीहरू मोदीका अभूतपूर्व समर्थन आधारका रूपमा रहेका छन् । उनीहरू मोदीको घुलमिल हुने स्वभाव, आक्रामकता, विदेशी नेताहरूलाई अँगालो हाल्ने व्यवहार मन पराउँछन् अनि मोदीको लहर आएको विषयलाई पूरै पत्याउँछन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उनीहरू वंशीय राजनीतिलाई घृणा गर्छन् । सन् २०१४ भन्दा फरक उनीहरू राहुल गान्धीको नाम सुन्दा हाँस्न थाल्दैनन् । तर उनले अहिलेसम्म के गरे अनि उनको कस्तो अनुभव छ भनी सोध्छन् । यो चुनावी अभियानमा हामीले सुनेको सबभन्दा बढी दोहोरिने पंक्ति हो : राहुलले अझै केही समय कडा मेहनत गर्नुपर्छ र थप अनुभव लिनुपर्छ । मोदी आफैं उदाएका हुन् र अनुभवी छन् भने उनको विकल्प किन खोजिरहनुपर्‍यो ?
मोदीप्रति बफादार यस समूहलाई भक्त नभनौं होला । तर मोदीप्रतिको भक्ति यस समूहमा निकै कडा देखिन्छ । यो भक्तिले जात र जातिको बफादारितालाई समेत नाघेको छ । तर उत्तर प्रदेशमा यो भक्ति मुसलमान, यादव र जाटवहरूको हकमा लागू हुँदैन ।
हुन त एक्जिट पोलकै आधारमा अन्तिम विश्लेषण गर्नु आफैंमा खतरनाक कुरा हो । संसारका सर्वोत्कृष्ट मतदान विशेषज्ञहरू पनि घरिघरि असफल भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । अमेरिकामा ट्रम्पको जीत, ब्रेक्जिट अनि अहिले आएर अस्ट्रेलियाको चुनावमा सत्तारूढ दलको जीतले ठूला भविष्यवाणी पनि फेल खुवाइदिए । तर एक्जिट पोल मिल्यो अनि मोदीले फेरि सरकार बनाए भने चाहिँ मैले माथि उल्लेख गरेका चारवटा फ्याक्टर निर्णायक ठहरिन्छन् ।
हिन्दुस्तान टाइमसमा प्रकाशित शेखर गुप्ताको विश्लेषण
मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्या बाहिर पाँच एकड जमीन ल...
पत्नी मेलानियाका साथ आगरा पुगे ट्रम्प, हेरे ताजमहल
भारतको दिल्लीमा नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्धको प्...
मलेसियामा महाथिरको राजीनामा स्वीकृत, अन्तरिम प्रधा...
सुदूरपश्चिममा सरदर ३ दिनमा सवारी दुर्घटनामा १ जनाको मृत्यु, २ घाइते
अपाङ्ग सङ्घमा अनियमितता, छानबिन गर्न माग
खुलेआम बिक्री हुँदै प्रतिबन्धित ग्यासका सिलिन्डर
दुग्ध पदार्थ खाँदा पछि गएर स्ट्रोकको खतरा घट्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष
गगन थापाको कटाक्ष : प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपा र देशको स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्यलाभ गर्न गइदिनुस्
यी मानिसको प्यान्टभित्रबाट निस्कियो सर्प ! (भिडियो)
बङ्गुरपालनमा व्यस्त वडाध्यक्ष, भन्छन् – बदमासी गरेर धन कमाउनु पर्दैन
सीसीटीभीमा कैद भयो भयानक दुर्घटना, भित्तोमा गाडी ठोकिएपछि उडे चालक (भिडियो)